Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tahotry ny tsy manan-tsiny | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tahotry ny tsy manan-tsiny
Mbola voapaingotra indray ny firenena eo amin’ny laharana iraisam-pirenena momba ny tontolo sy ny toe-piainana ametrahana ny olona voatana any am-ponja izay manosihosy ny zon’olombelona. Asa izay omen-tsiny amin’ny trangan-javatra toy izany ? Misy no mihevitra fa ny fametrahana ny olona gadraina any amin’ny fonja mampiadankadana no tsy ho rariny. Maro hono ny mponina tsy manan-tsiny no miaina anivon’ny tontolo tsy mendrika olombelona.
Tany amin’ny firenena afrikanina iray, 30 taona lasa izay, nanao antso ny fitondrana momba ny fikasana hanamboatra fonja vaovao. Ny tolotra nametra ny fisoko atao fitobian’ny gadra tsy hihoatra ny 1 metatra sy 20 no nahazo ny fifaninanana. Gaga no sady nanao fanakianana ny fikambanambe-pirenena sy ireo fikambanana mpiaro ny zon’olombelona. Tsotra ny navalin’ny mpitondra, raha fiadakadanana ny any am-ponja dia hirongatra ny isan’ny jiolahy sy tontakely. Raha tratra eo amin’ny fanaovana asa ratsy dia mitsotsotra amin’ny fanaovana «vakansy» any am-ponja no setriny…
Mitovitovy amin’izany ny olana eto an-toerana. Tsy manala na manamaivana ny andraikitry ny fitondrana anefa izany, indrindra moa raha dinihina fa mifanisa amin’ny gadra manefa ny saziny ny isan’ireo voafonja miandry ny fitsarana mikasika ny fiampangana azy. Izany hoe samy tsy zakan’ny tsenan’ny fanjakana na ny fitsarana ny olona miloloha fiampangana na ny fitazonana am-ponja an’ireo efa voaheloka. Mifandray amin’ny toe-piainan’ny ankamaroan’ny mponina izany.
Asa ny fomba fijery an’izany na ho lazaina fotsiny hoe tsy manjaka ny rariny, na ny fitenenana mivantana ny fanjakan’ny tsy rariny. Na ny fampiharana lalàna na ny fiankinana amin’ny rariny dia samy tsy afaka apetraka amin’ny sitrapon’ny lakalaka na amin’ny fahalalana làlam-poza sy ny fanalavana tànana. Mahitahita moa ny filazana an’izany mba tsy hitenenana mivantana fanaovana kolikoly.
Ao anatin’ny tontolo toy izany, very anjara ny rariny ary very saina ny olona tsotsotra izay na tsy tena mahantra aza nefa lavitry ny fananana ahafahana hiantso vonjy amin’ny Kolikoly sy ireo avara-patana ao amin’ny tempolin’izy io. Malaza midadasika eto amin’ny Nosy ny sehatra anjakany ary mbola manao fahagagana amin’ny fomba fanitarany ny fanjakazakany. Mahavita manabotry ny efa mahantra. Samy mitady ny Filoha afaka hanohitra ny onja ateraky ny herisetran’io fahavalo io ny mpifidy. Ary raha manam-bitana dia Filoha handresy tanteraka an’io biby sady maro loha no maro rantsana io.